Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota တို့၏ကျော်ကြားသောစာပိုဒ်တို ၂၉ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota သည် ၁၉၇၄ နှင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်အတွင်းအာဂျင်တီးနား၏အခြားရွေးချယ်စရာရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အဓိကအဖွဲ့ ၀ င်များမှာ Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi, Walter Sidotti နှင့်အဖွဲ့၏တေးဂီတခရီးစတင်စဉ်ကအခြားအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ဂီတလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းမှာသူတို့ဟာနောက်လိုက်များစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဂီတစတိုင်အပြင်သူတို့ရဲ့သီချင်းစာသားများကြောင့်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီတီးဝိုင်းကိုသင်ဂုဏ်ပြုချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာအဲဒီအဖွဲ့ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သီချင်းစာသားတွေကိုမှတ်မိနိုင်မှာပါ။ မင်းသူတို့ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးဆိုရင်၊ သူ၏ဝါကျများကိုဖတ်ပြီးနောက်သူ၏ဂီတသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းသင်သိလိုသည့်အမှားများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos က de Ricota ၏ကိုးကား
သူ၏သီချင်းများစွာမှစာပိုဒ်တိုများစုဆောင်းခြင်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ သူ၏ဂီတစတိုင်သည်သူ၏စကားစုများကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သို့သောပုံစံဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်နိုင်သည်။ သင်ဤဂီတတီးဝိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပေမည်။
Gualicho ကမေ့ဖို့လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတယ် နှုတ်ဆက်သူများသည်ချိုသောဝေဒနာများဖြစ်သည်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Gualicho ။
ရုပ်မြင်သံကြားတွင်အလွန်ကောင်းသောငါးစာဖြင့်သေစေလိုသောလင်းတများကသင့်ကိုသတ်ပစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျကြော်င်, ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်! –Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota၊ သင်ကနတ်သမီးလေးဖြစ်သည်။
အကျဉ်းထောင်များထက်အစဉ်အမြဲခံစားရသောနှလုံးနာကျင်မှု။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်! —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Murga purga ။
သင့်ရဲ့အန္တရာယ်တွေကဒေါသထွက်လွယ်ပြီးနီးပါးဒေါသမထွက်ဘဲနီးနေရင်၊ မှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်၊ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, အနည်းငယ်သာကောင်းသောစိတ်ကောင်းသော။
အလှဆုံးခြေထောက်တွေ၊ ငါတွေ့ခဲ့သမျှအဆင်းလှဆုံးခြေထောက်တွေနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဂိမ်းနှစ်ခုနဲ့အတူလွတ်လပ်စွာကစားနိုင်ခြင်းတို့ပါဝင်တယ်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Tarea fina ။
မင်းကိုပျော်ရွှင်တာကိုမြင်တာဟာဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော့်လက်မှတ်ကိုစောစောစီးစီးရသွားတယ်။ အစမ်းလေ့ကျင့်မှုမှာသူတို့ကငါတို့ရဲ့လှိုင်းလုံးကြီးကိုနမ်းနေပြီဆိုတာငါကြားခဲ့ရတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ဇီးကွက်နဲ့အတူသုံးဖြုန်းစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာငါကြားခဲ့တယ်။ –Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Country Rock ။
အပြောင်းအလဲနှင့်အတူနေပါ, ရောဂါလား, သင်ကြိုးနှင့်ချင်ပန်ဇီမျောက်များ၏တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆင်းရဲသောအရာ, တံတွေးနှင့်အခြားဘာမျှမနှင့်အတူထိုဘူးကိုစောင့်ရှောက်, သင်၏လျှာကိုကိုက်ငါ့ကိုနီးပါးငါ့ကိုအရူး။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricotta, ရုရှားဒိန်ခဲ။
သူ၏ရွေးခြယ်မှုဟောင်းသည်သူသည်တက္ကစီပေါ်မှကန်ထုတ်လိုက်ပြီးလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ သူသည်တံထွေးနှင့်ထွေး။ လေတိုက်ရာသို့ပါသွား၏။ –Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota၊ ရေကူးကန်၊ Averna နှင့် Papusa ။
သင့်ရဲ့ကျွန်စနစ်ကိုဂြိုလ်သားကအလှဆင်တယ်။ ကြောင်း minestron အတွက်ရေကူး, Porco Rex Porno ရော့ခ်သွား! —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Alien Duce ။
ချိန်ခွင်လျှာတွင်နေရာယူရန်သူ၏အာရုံကိုဖျတ်ခနဲပြုသူတစ် ဦး, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာရယ်မောသွေးထွက်သံယို၏, ကောင်းကင်ပြိုကွဲ၏ကောင်းကင်ဒဏ်nာရီ၏။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, သူကလှပသောနေ့ရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏အထီးကျန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဤမျှလောက်ကျွန်ခံရန်မည်မျှကြာလိမ့်မည်နည်း။ အသက်တာနက်နေစဉ်တွင်သင်သည်နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, ပျော်ရွှင်မှုသည်ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါ။
သူမသည်အလွန်လှပသောသူဖြစ်ရမည်။ သူ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသူမမျက်လုံးများမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်း။ သူသည်ဆူးပင်များကိုလက်သည်းများ၌သံရိုက်လျှင်တောင်မှသူနှင်းဆီ၏ပင်စည်ကိုကိုက်ချင်သည်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, သူမအရမ်းလှနေရမည်။
ဒါပေမယ့် ... မင်းရဲ့အရာအားလုံးကသူကပြောတဲ့ခရီးဆောင်သေတ္တာတစ်လုံးနဲ့ fit လား။ ဘရိတ်မပါဘဲခေါင်းဆောင်ကုန်သည်? မင်းရဲ့ငွေကြေးကပြောရင်၊ အဲဒီငွေကြေးကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးပြောရင် ... —Patricio Rey နဲ့သူ့ရဲ့ Redonditos de Ricota, Artillery Blues ။
ညအမှောင်ဆုံးဖြစ်သည့်နေ့သည်သင့်နှလုံးသားထဲသို့ရောက်လာသည်။ နေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာမှအမြှုပ်မပြသောမာရ်နတ်မရှိရင် —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Lost Toys ။
toxi-taxi ကလာသည်နှင့်သွားသည်၊ သင်၏အရိပ်သည်ထင်ရှားသောအလုံးအရင်းများနောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်များဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသင်ကဲ့သို့သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းစေသည်။ –Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Toxi-taxi ။
Rock ကိုလူတိုင်းအတွက်အံ့ဘွယ်သောအမှု, ကြွက်ပျော်မွေ့။ ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်း, သူတို့ရဲ့လှည့်ကွက်ဖေါ်ပြခြင်းသေစေနိုင်သောချဉ်။ မနေ့ကသတင်းများ၊ အပို၊ Extra! -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota၊ မနေ့ကသတင်းများ။
အထူးကောင်လေးဖြစ်သည့် Supermouth၊ လက်ရှိကမ္ဘာ၏ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ နယူးယောက်ကိုသွားချင်တယ်၊ စီးရီးကိုသွားချင်တယ်၊ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, မည်သူမျှမပြီးပြည့်စုံပါ။
ဖန်ခွက်များများလွန်းသောကျွန်တော့်အချိုရည်ကိုဂရုစိုက်လိမ့်မည်။ ငါ့ကိုအရူးကိုက်တဲ့အခါ။ Yum fri frufi fali fru! -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, fram fri frufi fali fru ။
ကလေးများ၊ ရွှင်လန်းမှုများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုများရှိသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောဝိုင်များစွာရှိပြီးအကောင်းဆုံးဝိုင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ -Patricio Rey နဲ့သူ့ရဲ့ Redonditos de Ricota၊ ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကမကျခဲ့ပါဘူး
ငါတို့သခင်သည်ဒဏ်ရာရသောဤတိုင်းပြည်၏ကျွန်ကိုဂရမ်တိုင်း၌နေ့စဉ်သေမင်းသို့ဖွင့်ပေးသည်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်သည်ကျွန်ဖြစ်သည်။
သင်္ဘောကျင်းလေးသည်ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးပါ။ သူသည်နှစ်ရက်ကြာအိမ်ကြီးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကွန်တိန်နာတွေမှာတပ်ဆင်ထားတယ်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, သင်္ဘောကျင်းမှကောင်လေး။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူမျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သင့် ဦး နှောက်သည်ဆပ်ပြာဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏အစီအစဉ်တွင်သင်၏ပန်းပွင့်ဓားနှင့် online curabichero တို့ပါဝင်သည်။ —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, chard ကဲ့သို့စဉ်းစား။
နှစ်နာရီလွန်သွားပြီးသူ့ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ နှစ်နာရီပဲရှိသေးတယ်၊ မွန်းလွဲနှစ်နာရီမှာသူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ငါသွေးထွက်တယ် Lemon! သူတို့အဖေက Lemon ကိုပေးတယ်။ မင်းလိုကြွေပြားမှသွေးထွက်တဲ့ငါတို့ဆင်းရဲသားLimón။ —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, သူတို့ကငါ့ကိုသတ်တယ်၊ သံပုရာ။
ဖန်ခွက်မျက်လုံးကောင်းတစ်လုံးနှင့်သင်၏အကြည့်သည်အသစ်သောအယူသီးမှု၊ pac-man အသစ်၏ပျော့ပျောင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, La pac-man en el Savoy ။
တစ်နေ့ကျတော့လှေကတုန်ခါသွားပြီးဆုကကျသွားတယ်။ မင်းတို့ကမင်းကိုသေအောင်ထားခဲ့ကြတာပါ။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, ဒဏ်ရာများ Salting ။
ဒီနေ့ငါတို့အားလုံးဟာအတိတ်ကလူတွေပါ၊ ပြီးတော့အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုတာဘယ်သူမှအရင်ကလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး Scaramanzia, ကို virtual ချစ်ခြင်းမေတ္တာ cabal ။ တစ် ဦး sony ဆာမူရိုင်းများအတွက် Scaramanzia ။ –Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Scaramanzia ။
Rosemary တစ် ဦး ချိုမြိန်အရက်သည်အရူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်, သင် carioca အဘို့ဤသီချင်းအားဖြင့်ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်! —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota, Carioca ၏ချစ်သူမိန်းကလေး။
သူကမနေ့က (၁၅) နှစ်လောက်နိုင်ငံရေးအရငွေသုံးကောင်နဲ့ငွေပေးခဲ့ရတယ်။ -Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota၊ အကျဉ်းသားတိုင်းသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်သည်။
သူ့ရဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ alas !, ဖားတစ်ယောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်မှာဘုန်းကြီးမပေါ်လာပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ပါတီပွဲတော် Garufa သည်တစ်ယောက်တည်းခရီးလှည့်လည်သွားပြီးသူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်လှည့်လည်နေသည်။ —Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota၊ Captain Buscapina ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စွန့်စားမှုများ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota တို့၏ကျော်ကြားသောစာပိုဒ်တို ၂၉ ခု
“ ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက်အံ့ wonder စရာကောင်းတဲ့ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေကိုဖမ်းပြီးမဖော်ပြနိုင်တဲ့အစအနတွေကိုမျိုချလိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်မှုလှည့်ကွက်»။
“ မင်းကငါထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲနေတယ်။ မင်းကိုဒီလိုတွေ့ရတာအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ သူတက်လေလေပဲ။ Monito ကဘဝပဲလေ၊ မင်းမြင်ရတဲ့မြည်း ..
ငါမင်းကို Indi ချစ်တယ်ဆိုတာသံသယမရှိဘဲ…အကောင်းဆုံးအာဂျင်တီးနား composer.melina .. ဒီနေ့ baires en Galicia ..